कलाकार संघ चुनाबः सह- कोषाध्यक्षमा पवित्राको उमेदवारी किन ? « Mom Nepal
कलाकार संघ चुनाबः सह- कोषाध्यक्षमा पवित्राको उमेदवारी किन ?
काठमाण्डौँ- नेपाली कलाकारहरुलाई यतिबेला चुनाबी सरगर्मीले छोएको छ । यहि जेठ २५ गते सम्पन्न हुन गइरहेको नेपाल चलचित्र कलाकार संघको निर्वाचनको उमेदवारी दर्ता प्रक्रिया सकिँदैगर्दा नेतृत्वपङ्ग्तीका आकांक्षी कलाकारहरु आफ्नो पक्षमा मत माग्न लागिपरिरहेका छन् । यीनै भीडमा एक नाम हो, सह-कोषाध्यक्ष पदकी उमेद्वार पवित्रा आचार्य ।
एक दशक देखि चलचित्र कलाकारितामा सकृय पवित्रा अभिनयसँगै कोरियोग्राफीमा पनि व्यस्त छिन् । अभिनेत्रीसँगै कोरियोग्राफरको छबि बनाएकी पवित्राले उपस्थितीको छोटो समयमा फिल्म क्षेत्रभित्र आफुलाई धेरै अगाडी लगिन् । उनि पछिल्लो पटक ‘मेला’ नामको फिल्ममा देखा परिन् । ‘मेला’मा उनकै कोरियोग्राफीमा बनेको एक गीतले त करोड बढि भ्यूज समेत पाएको छ ।
आफ्नो कलाकारिता क्षेत्रको अनुभवलाई अब कलाकारहरुकै छाता संगठनभित्र रहेर यसैको हक-हितमा खर्चिनकै लागी उमेदवारी दिएको उनको तर्क छ । यसअघिको कार्यकालमा कार्यसमिति सदस्य रहेकी पवित्रा एक कदम माथि उठ्न खोज्दा स्वभावैले उक्त पदकी दाबेदार पनि हुन् ।
उमेद्वारी दर्तासँगै सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त स्टाटसमा उनले कलाकारहरुको वर्गीय हकहितका लागी मन, वचन र कर्मले संघको गरिमालाई उच्च राख्न भूमिका खेल्ने र सेवामा समर्पित हुने वाचाका साथ उमेदवारी दिएको उल्लेख गरेकी छिन् । सँगसँगै आफ्नो उमेदवारीलाई सार्थक बनाउन र बिजयी बनाउन सम्पूर्ण अग्रजहरुको आशीर्वाद र सदस्य कलाकार साथीहरुको साथ, सहयोग तथा समर्थनको अपेक्षा राखेकी छिन् ।
सह- कोषाध्यक्ष पदकी उमेदवार अभिनेत्री पवित्रा आचार्य ज्यूलाई हाम्रोतर्फबाट पनि शुभकामना ।